Banyere Anyị - Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.
The dayameta nso nke slewing bear nwere ike si 200 mm na 5000 mm.Maka slewing mbanye, enwere nha itoolu (9) dị iche iche dị site na 3" ruo 25" nwere ihe karịrị ụdị 60 iji zute ma ihe achọrọ nleba anya na nke ziri ezi.
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd, tọrọ ntọala na February 18, 2011. Wanda bụ ọkachamara slewing ngwọta soplaya na slewing bearing na slewing mbanye, integrating R & D, imewe, n'ichepụta na ọrụ.Companylọ ọrụ ahụ nwere ike teknụzụ siri ike, ikike nrụpụta siri ike, akụrụngwa nnwale zuru oke, na-enye ike inye 4000 tent nke slewing bear na 1000 sets of slewing drive kwa ọnwa.Ụlọ ọrụ ahụ enwetala ISO9001: 2015 na CCS asambodo.
Ihe ngosi na foto nyocha ụlọ ọrụ
Xuzhou Wanda na-ere ngwaahịa ndị ahụ nke ọma na mba ahụ ma na-ebupụ ihe karịrị mba 60 na mpaghara gụnyere United States, Canada, Germany, Britain, Italy, India, South Korea, Russia, Singapore, Vietnam, Malaysia, wdg, na-enweta na-agbanwe agbanwe. otuto dị elu sitere n'aka ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ.Na anyị bụ ndị na-aga n'ihu ma kwụsie ike soplaya nke SANY, XCMG na Terex.
1.Wanda nwere ndị ọrụ karịa ndị 230, nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-enyefe ngwa ngwa, na-emepụta ikike mmepụta kwa afọ karịa 50,000pcs.
2.Our engineering otu nwere ike inye gị ahaziri ngwọta dị ka gị chọrọ ma na-akwado Tsinghua University, China University of Mining na Technology na Northwwest Polytechnical University na technology nnyocha & mmepe.
3. Ndị na-ere ahịa siri ike na-ere ngwaahịa ahụ karịa mba na mpaghara 60, na-enweta otuto dị elu na-agbanwe agbanwe site n'aka ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ.
4.Special mgbe-sales engineer na-enye ngwa ngwa nzaghachi n'ime 24 awa.